MOTA T / DAR T - Sorrento Therapeutics
CAR T (Chimeric Antigen Receptor-T Sero)
Sorrento's cellular therapy zvirongwa zvinotarisa paChimeric Antigen Receptor-T Cell (CAR T) yekugamuchira cellular immunotherapy kurapa mabundu akasimba uye emvura.
Chirongwa cheCAR T chinosanganisira CD38, CEA neCD123.
Sorrento's CD38 CAR T inonangana nepamusoro-inotaura CD38 masero akanaka, ayo anogona kudzikamisa pane-chinangwa/off-bundu chepfu.
Mumiriri wekambani iyi CD38 CAR T ari kuongororwa mumultiple myeloma (MM). Chirongwa ichi chakanyatso ratidza chakasimba preclinical anti-tumor chiitiko mumhando dzemhuka uye parizvino chiri muchikamu chekutanga kuyedza muRRMM. Pamusoro pezvo, Sorrento yakashuma data kubva kuPhase I miedzo yecarcinoembryonic antigen (CEA) inotungamira chirongwa cheCAR T.
Iyo kambani iri kuongorora CD123 CAR T mune acute myeloid leukemia (AML).
DAR T (Dimeric Antigen Receptor-T Sero)
Sorrento inoshandisa tekinoroji yekugogodza-out-in (KOKI) tekinoroji kugadzirisa akajairwa ane hutano anopihwa anotorwa maT maseru kuti aaite mainjiniya iwo kuti aratidze dimeric antigen receptor muT-cell receptor (TCR) alpha chain inogara nharaunda (TRAC). Nenzira iyi, TRAC inoburitswa uye antigen inoroverwa munzvimbo yayo.
Iyo Dimeric Antigen Receptor (DAR) inoshandisa Fab pachinzvimbo che scFv inoshandiswa neyakajairwa Chimeric Antigen Receptor (CAR) T masero. Isu tinotenda iyi DAR yakaratidzwa mune preclinical zvidzidzo zvakanyanya kujeka, kugadzikana uye potency.
Vadivelu Comedy Dailymotion vi Technology
Inotevera-Gen Dimeric Antigen Receptor (DAR) Technology